एमसीसी जनसाधारणको नजरमा
गायिका गागाको चोरी भएका दुई ‘फ्रेन्च बुलडग’ सुरक्षित भेटिए
इन्टरको सहज जित
टोटेनहमको जितमा बेलको दुई गोल
लेस्टर घरेलु मैदानमा आर्सनलसँग पराजित
अम्बे स्टिल्सको डिलर सम्मेलन सम्पन्न
निधनको ३ वर्षअघि कोरेको भ्यान गोको पेन्टिङ सार्वजनिक
महाशाखाले थाल्यो नागरिकमैत्री आचरण सुधार कार्यक्रम
बी डिभिजन लिगमा खुमलटार र ब्वाइज युनियन विजयी
सेतो मच्छिन्द्रनाथको प्रवलीकरण सुरु
ईपीएलको नयाँ मिति सार्वजनिक
ब्लग प्रतिक्रिया दिनुहोस्
एमसीसी जनसाधारणको नजरमा डा. विनोद ढकाल (विधा)
बाह्रखरी - शुक्रबार, असार ५, २०७७
अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत सहयोग लिएमा अमेरिकी सैनिक नेपाल छिर्छन् कि छिर्दैनन् भन्ने बहस जारी छ । यसबाहेकका अरु बहस गौण हुन्जस्तो लाग्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायत ठूला भनिएका प्रायः नेता अनि बुद्धिजीवीले यस विषयमा जवाफ दिइसकेका छन् । यसमा दिमाग धेरै खेलाउन पर्ने देखिन्न । राज्यको सूचना जोसँग बढी छ उनीहरुको विचार सुन्नुपर्छ ।
अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा हो — ‘नो रिस्क नो गेन’ । उहिले भारतले के भन्छ भनेर डराएको भए आज हामी काठमाडांैबाट कोदारी कसरी गइरहेका हुन्थ्यौँ होला ?
यहाँ नियतमा मात्र हैन विधि र प्रक्रियामा पनि खोट छ । सरकारी योजना १० करोडको भए उक्त पैसा ५ वर्ष लगाएर दिइने गर्छ । त्यसबीच लागत खर्च अर्को १० करोड थपिइसकेको हुन्छ । हामीलाई ढुक्कसँग पैसा पुग्ने गरी बजेट भएको योजना चाहिन्छ ।
हामी आफैँँ केही गर्न सक्तैनौ । कोही केही गर्दिन्छु भनेर आएको छ । उसले भनेको काम पनि हामीले वर्षौं केही अन्यथा नसोची गर्दै आएका छौँ । पछि पनि लुरुलुरु गर्दिन्छौ । गाउँघरतिर अभागी ‘खाने बेलामा रिसाउँछ’ भन्थे ।
गरिब व्याप्त छ । शिक्षा गतिलो छैन । अलिअलि शिक्षित देश बस्दैनन् । पाखुरा बलियो हुने अशिक्षित पनि देशमा बस्दैनन् । उत्पादन धेरै छैन । उत्पादन गर्ने वातावरण छैन । यसरी सधैँ निराश भएर बस्नु ? यो घनचक्करबाट अब मुक्त हुनु छ ।
जति गाली गरे पनि तिनै नेता हाम्रा ऐना हुन् । जस्ता जनता उस्तै नेता । घरमा आमाले एउटा कुरा, बाबाले अर्को कुरा अनि पत्नीले अर्झ अर्कै कुरा भने के गर्ने ? हाम्रा नेताहरु पनि दिल्ली, बेइजिङ, ब्रसेल्स, वासिङ्टनका फरक फरक कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । अनि अन्त्यमा मानिसभित्रको स्वार्थ पनि छ ।
अब एमसीसी अस्वीकार गरेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई मात्र स्वीकार गर्न त सकिन्न । न त बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ । कुरा यत्ति हो यो अर्को अरुण नहोस् । जनसाधारणका रूपमा मलाई अविकासको पुरानै चक्रव्यूहमा फस्न मन छैन ।
सबै देशमा ठूला परियोजना कुनै न कुनै बहानामा विरोध भएकै छन् । तर ती देश विकसित भए जसले ठीक समयमा जोखिम पनि उठाए । खाडी मुलुकले विदेशी लगानी नभित्र्याएका भए आजसम्म उनीहरु बालुवा चालेर घर बनाइरहेका हुन्थे । अर्कोतर्फ कङ्गोजस्ता राष्ट्र पनि छन् । जो स्रोतका धनी भए पनि युद्धमा होमिएर कंगाल भएका छन् । धेरै सूचना स्रोतमा पहुँच भएका बुद्धिजीवीले यस्तो जोखिम कमसेकम एमसीसी परियोजनामा देखेका छैनन् । केही जोखिम छ नै भने पनि अब विकासको गति चिप्लेकीरा होइन चितुवाको जस्तो हुनुपर्छ । यसै त हामी अझै उन्नाइसौं शताब्दीमा छाैँ । जोखिमै नलिए कसरी उभो लागिन्छ ?
बहश हुनु राम्रो हो । इतिहासले अहिले हामीलाई विकासका बारेमा बहस गर्ने थोरै समय दिएको छ । नत्र हिजो हामी शान्ति खोज्दै थियौँ । स्वतन्त्रता खोज्दै थियाैँ । नेपालका प्रायः सबैजसो दलका ठूला नेताले समर्थन गरेको परियोजना राम्रै त होला नि । फेरि हामीसँग अर्को विकल्प पनि त छैन । अतः यो ‘काग पिना सुकिरहेको’मा खुसी नै छ ।
शुक्रबार, असार ५, २०७७ मा प्रकाशित
अतुल कोइराला उच्च शिक्षाका लागि रूस जाने तयारीमा थिएँ । उड्ने केही दिन अघि काका सुशील कोइराला (सुशील दा)को आशीर्वाद लिन... सोमबार, माघ २६, २०७७
एक मिनेट आकाशमा...
‘मलाई मान्छेहरुको बस्तीभन्दा केही टाढा, सहरको कोलाहलमुक्त ठाउँ अनि आफू एक्लो भएर रमाउन मिल्ने ठाउँमा जान मन छ,’ कसैले के... सोमबार, पुस २०, २०७७
महामहिम श्रीमती प्रतिभा राणा ! जापानका लागि नेपालको राजदूतावास, टोकियो जय नेपाल । आज म तपाईंलाई सम्झँदै छु । हुनत, धेरैले बिर्सिसकेका होलान्... शुक्रबार, पुस १७, २०७७
कमरेड ज्ञानेन्द्र पथिक !
अक्षर काका शासकहरू मतले सप्रिँदैनन्, मतिले जरुर बिग्रन्छन् ! प्रधानमन्त्रीज्यू ! मुलुकको कार्यकारी प्रमुखप्रति बारबार टिप्पणी गरिरहनुपर्दा, देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै लक्षित गरेर... सोमबार, पुस १३, २०७७
सफा वाग्मतीको सपना
वाग्मती सफाइ सामाजिक अभियान हो । यसको कुनै कार्यालय छैन । स्वयंसेवीहरूले यसलाई सञ्चालन गर्दैआएका छन् । मानिसहरु नदीलाई देशको नसा... शुक्रबार, पुस ३, २०७७
लेखनमा वैयक्तिकता : कुण्ठा कि आत्माभिव्यक्ति ?
नेपाली साहित्यमा निजत्व लेखनबारे बहसै नभएको त होइन तर बहसको घेरा भने सधैँ साँगुरिएजस्तो लाग्छ । कतिपयलाई लाग्छ निजत्व लेखन... शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७
निर्वाचन आयोगको नियतमा शङ्का !
नीति, नेति र नैतिकता
ज्योतिषी, देउवा र सत्ता जगत नेपाल
न्यायालयको अनुभूति कुलचन्द्र वाग्ले
‘उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा मस्तिष्काघातको जोखिम’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्– आदेश भइसक्यो अब जो हुकुम भन्नुपर्ला !